“ဖုတျ” ဝငျတယျ ဆိုပွီး သေ တဲ့ အမအေို တဈဦး ရဲ့ အလောငျး ကို ရငျခှဲရုံမှာ စဈဆေးကွညျ့လိုကျသောအခါ… – GaMone Media
Homepage / Knowledge / “ဖုတျ” ဝငျတယျ ဆိုပွီး သေ တဲ့ အမအေို တဈဦး ရဲ့ အလောငျး ကို ရငျခှဲရုံမှာ စဈဆေးကွညျ့လိုကျသောအခါ…
အေမဆာလို့ပါ သားရယ္တဲ့လား …
တကယျဖုတျမဟုတျဘဲ မိဘအရငျးကို ဖုတျထုတျတယျဆိုပွီး ကိုယျတိုငျပဲ လုပျသညျ ဖွဈစသေူ တဈပါး ကိုလုပျခှငျ့ ပေးသညျဖွဈစေ၊ အဲဒီသားသမီး ကိုယျတိုငျမသိလိုကျသောပဉ်စာနန်တရိယကံကွီးထိုကျပါတယျ။
ဖုတျဝငျတယျဆိုပွီး အသတျခံလိုကျရတဲ့ အဖှားတဈဦး ကိုယျတှေ့ လလေ့ာဖူးပါတယျ။ (ဒသေနှငျ့အမညျမြားမပွောပါ။)
ဒီအနအေထားက သားသမီးတှငွေိုငွငျရုံတငျမက မွနျမွနျပငျသစေခေငျြ နပေါပွီ။ ကိုယျ့အညဈအကွေးကိုတောငျ ကိုယျတိုငျမစှနျ့နိုငျတော့ဘူး …။ ပွုစုတဲ့သူတှကေရှံတတျတော့ ပိုဒုက်ခရောကျတာပေါ့။ ဒါပမေယျ့ တဈခြို့အဖိုးအဖှားတှကေ အသကျသာကွီးတာ ဝမျးမီးကကောငျးတုနျး။အိပျရာထဲ လဲနပေမေယျ့ အစားကို ကောငျးကောငျးစားနိုငျပါတယျ။
သူတို့ကွှေးတာ စားနရေတဲ့ ဘဝဆိုတော့ ထပျပွီးမပွောရဲ တော့… ငွိမျနလေိုကျရတယျ။ကိုယျကိုယျတိုငျ အဖိုးအဖှားနရောရောကျရငျ အဲဒီဒုက်ခတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ သားသမီးတှေ အိပျကုနျပွီအထငျနဲ့ ဗိုကျကလညျးတအား ဆာလာတာကွောငျ့ …သားသမီးတှကေိုလညျး မနှိုးရဲတော့ ဖငျတှနျးဖငျတှနျးနဲ့ မီးဖိုခြောငျဆီကို တရှရှေ့ေ့…..
အဲဒီအခကျြကဘဲ ဖုတျဝငျနပွေီလို့ စှပျစှဲစရာ ဖွဈသှားတယျ။ ဇရာဒဏျ/ရောဂါ ဒဏျဖိစီးနတေော့ ကွောငျအိမျကိုအားပွု ပွီး တဖွညျးဖွညျးထလိုကျတယျ။ ဖေးမမယျ့သူမရှိဘူးဆိုတဲ့ အသိကွောငျ့သာ အားတငျးပွီး ရပျနိုငျတာ။ဖေးမမယျ့သူ တဈယောကျလောကျတှရေ့ရငျ ခကျြခငျြးလဲကသြှားမှာအမှနျပါ။
အဲဒီအခြိနျ မသင်ျကာစိတျဝငျနတေဲ့ သားသမီးတဈယောကျက မီးဖိုခြောငျမှာအသံကွားတာ နဲ့ ထလာပွီးလာကွညျ့တဲ့အခြိနျ။ ကွောငျအိမျထဲတှတေဲ့ငါးဟငျးကို ယူစားနတေဲ့ အမအေိုကိုတှလေို့ကျတော့ .. အိပျရာပျေါက မထနိုငျတဲ့ လူမမာ ဘယျသူမှမသိအောငျ သနျးကောငျအခြိနျမှာ သူ့ဟာသူ ထစားနတောဟာ ဧကန်တဖုတျ ဆို တာမြားလား…?
အဲဒီအခြိနျမှာ….“အမဘောလုပျနတောလဲ”လို့ မေးရော …..သားသမီးကို ရုတျတရကျ တှလေို့ကျရတဲ့အမအေိုဟာ ငါ့ကို ဖေးမပေးမယျ့ သားရောကျလာပွီဆိုပွီး အားကိုးတဲ့အနနေဲ့ တငျးထားတဲ့စိတျကို လြှော့ခြ လိုကျတာနဲ့ ခှကေနဲလဲကသြှား တော့တယျ။
ဒါကိုဘဲ လုနာမှာဝငျပူးကပျနတေဲ့ ဖုတျက ဆရာရဲ့စကျဖွတျ ဆေးတျောကွီးရဲ့ အစှမျးကို ဘယျဖုတျ အမြိုးအစားမှမခံနိုငျပါဘူးဆိုပွီး ဂုဏျယူဝငျ့ကွှားနတေယျ။ တစတစနဲ့ လူနာအမအေိုရုနျးကနျလူးလှနျ့ နရောက တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ငွိမျကသြှားပါတော့တယျ။ ရကျရှညျလမြား လူနာမှာ စှဲကပျပွီး ညာစားနတေဲ့ ဧရာမနောကျဆုံးအဆငျ့ ဖုတျထှကျ သှားပါပွီ။
အဲဒီမှာ ကြေးရှာမှာတာဝနျကနြတေဲ့ကြောငျးဆရာလေးက ဒီဖွဈစဉျ ကို မကနြေပျတာနဲ့မွို့ကသူ့သူငယျခငျြး ဆရာဝနျကို အကွောငျးကွားတော့ ဆရာဝနျက အလောငျးကိုရငျခှဲရုံမှာစဈဆေးလိုကျတော့မှ အဖွပေျေါတော့တယျ။ လားလား အောကျလမျးဆရာရဲ့ စကျဖွတျဆေးက အစှမျးထကျမှာပေါ့…ကွှကျသတျဆေးတှေ ဖွဈနတောကိုး တိုတို ပွောရငျ အောကျလမျးဆရာကလညျး လူသတျမှုနဲ့ထောငျကြ သှားတယျ။
တိုတိုပွော လို့မရတာက ပဉ်စာနန်တရိယကံကို ကြူးလှနျ လိုကျတဲ့ သားသမီး တှေ သိလို့ပဲဖွဈဖွဈ မသိလို့ဘဲဖွဈဖွဈ ဒီကံအတှကျ ပေးဆပျရမယျ့ အပွဈကွှေးက မသေးဘူးဆိုတာ…သားသမီးတိုငျးသိနိုငျကွပါစေ..
လေးစားစှာဖွငျ့ ခရဈဒကျ ……
အေမဆာလို့ပါ သားရယ္တဲ့လား …
တကယ်ဖုတ်မဟုတ်ဘဲ မိဘအရင်းကို ဖုတ်ထုတ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်သည် ဖြစ်စေသူ တစ်ပါး ကိုလုပ်ခွင့် ပေးသည်ဖြစ်စေ၊ အဲဒီသားသမီး ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်သောပဉ္စာနန္တရိယကံကြီးထိုက်ပါတယ်။
ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုပြီး အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အဖွားတစ်ဦး ကိုယ်တွေ့ လေ့လာဖူးပါတယ်။ (ဒေသနှင့်အမည်များမပြောပါ။)
ဒီအနေအထားက သားသမီးတွေငြိုငြင်ရုံတင်မက မြန်မြန်ပင်သေစေချင် နေပါပြီ။ ကိုယ့်အညစ်အကြေးကိုတောင် ကိုယ်တိုင်မစွန့်နိုင်တော့ဘူး …။ ပြုစုတဲ့သူတွေကရွံတတ်တော့ ပိုဒုက္ခရောက်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့အဖိုးအဖွားတွေက အသက်သာကြီးတာ ဝမ်းမီးကကောင်းတုန်း။အိပ်ရာထဲ လဲနေပေမယ့် အစားကို ကောင်းကောင်းစားနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုအစားဝင်နေတာကိုဘဲ မသိနားမလည် ဆရာဝင်လုပ်တဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်က “ဖုတ်ဝင်နေပြီ” တဲ့။အသက်ကကြီး ရောဂါက နာတာရှည် ပြုစုရတာကြာလာတော့ သားသမီးတွေ စေတနာပျက်လာ ပြီလေ။လူကြီး လူမမာဆိုပြီး ကျွေးတာကနည်းနည်း ဆိုတော့ ညသန်းကောင်အချိန်ရောက်တော့ ဆာလာပြန်ရော။ ကျွေးတုန်းက မဝသေးဘူးဆိုပြန်တော့ အစားများရင် ချေး(ချီး)ထွက်မယ်ဆိုပြီး ပန်းကန် သိမ်းသွားတယ်လေ။
သူတို့ကြွေးတာ စားနေရတဲ့ ဘဝဆိုတော့ ထပ်ပြီးမပြောရဲ တော့… ငြိမ်နေလိုက်ရတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အဖိုးအဖွားနေရာရောက်ရင် အဲဒီဒုက္ခတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သားသမီးတွေ အိပ်ကုန်ပြီအထင်နဲ့ ဗိုက်ကလည်းတအား ဆာလာတာကြောင့် …သားသမီးတွေကိုလည်း မနှိုးရဲတော့ ဖင်တွန်းဖင်တွန်းနဲ့ မီးဖိုချောင်ဆီကို တရွေ့ရွေ့…..
အဲဒီအချက်ကဘဲ ဖုတ်ဝင်နေပြီလို့ စွပ်စွဲစရာ ဖြစ်သွားတယ်။ ဇရာဒဏ်/ရောဂါ ဒဏ်ဖိစီးနေတော့ ကြောင်အိမ်ကိုအားပြု ပြီး တဖြည်းဖြည်းထလိုက်တယ်။ ဖေးမမယ့်သူမရှိဘူးဆိုတဲ့ အသိကြောင့်သာ အားတင်းပြီး ရပ်နိုင်တာ။ဖေးမမယ့်သူ တစ်ယောက်လောက်တွေ့ရရင် ချက်ချင်းလဲကျသွားမှာအမှန်ပါ။
အဲဒီအချိန် မသင်္ကာစိတ်ဝင်နေတဲ့ သားသမီးတစ်ယောက်က မီးဖိုချောင်မှာအသံကြားတာ နဲ့ ထလာပြီးလာကြည့်တဲ့အချိန်။ ကြောင်အိမ်ထဲတွေ့တဲ့ငါးဟင်းကို ယူစားနေတဲ့ အမေအိုကိုတွေ့လိုက်တော့ .. အိပ်ရာပေါ်က မထနိုင်တဲ့ လူမမာ ဘယ်သူမှမသိအောင် သန်းကောင်အချိန်မှာ သူ့ဟာသူ ထစားနေတာဟာ ဧကန္တဖုတ် ဆို တာများလား…?
အဲဒီအချိန်မှာ….“အမေဘာလုပ်နေတာလဲ”လို့ မေးရော …..သားသမီးကို ရုတ်တရက် တွေ့လိုက်ရတဲ့အမေအိုဟာ ငါ့ကို ဖေးမပေးမယ့် သားရောက်လာပြီဆိုပြီး အားကိုးတဲ့အနေနဲ့ တင်းထားတဲ့စိတ်ကို လျှော့ချ လိုက်တာနဲ့ ခွေကနဲလဲကျသွား တော့တယ်။
အဲဒါလူနာရှင် အာမခံပေးပါပေါ့။ သားသမီးတွေက အသိဉာဏ်ဗဟု သုတကလည်းမရှိ လူနာအမေအိုကို စိတ်ပျက်တဲ့ အခံနဲ့ ဆရာကို တဖက်သတ် ယုံကြည်ပြီး ခံဝန်လုပ်ပေးလိုက် တယ်။ သူတို့သဘောတူပြီး ကုတာပါပေါ့။ ဆရာရဲ့နောက်ဆုံး စက်ဖြတ်ဆေးလည်း တိုက်ပြီးရော လူနာအမေအိုခမျာ လူးလိမ့်နေအောင်ခံစားလိုက်ရတယ်။
ဒါကိုဘဲ လုနာမှာဝင်ပူးကပ်နေတဲ့ ဖုတ်က ဆရာရဲ့စက်ဖြတ် ဆေးတော်ကြီးရဲ့ အစွမ်းကို ဘယ်ဖုတ် အမျိုးအစားမှမခံနိုင်ပါဘူးဆိုပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနေတယ်။ တစတစနဲ့ လူနာအမေအိုရုန်းကန်လူးလွန့် နေရာက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ငြိမ်ကျသွားပါတော့တယ်။ ရက်ရှည်လများ လူနာမှာ စွဲကပ်ပြီး ညာစားနေတဲ့ ဧရာမနောက်ဆုံးအဆင့် ဖုတ်ထွက် သွားပါပြီ။
အဲဒီမှာ ကျေးရွာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ကျောင်းဆရာလေးက ဒီဖြစ်စဉ် ကို မကျေနပ်တာနဲ့မြို့ကသူ့သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်ကို အကြောင်းကြားတော့ ဆရာဝန်က အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံမှာစစ်ဆေးလိုက်တော့မှ အဖြေပေါ်တော့တယ်။ လားလား အောက်လမ်းဆရာရဲ့ စက်ဖြတ်ဆေးက အစွမ်းထက်မှာပေါ့…ကြွက်သတ်ဆေးတွေ ဖြစ်နေတာကိုး တိုတို ပြောရင် အောက်လမ်းဆရာကလည်း လူသတ်မှုနဲ့ထောင်ကျ သွားတယ်။
တိုတိုပြော လို့မရတာက ပဉ္စာနန္တရိယကံကို ကျူးလွန် လိုက်တဲ့ သားသမီး တွေ သိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မသိလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကံအတွက် ပေးဆပ်ရမယ့် အပြစ်ကြွေးက မသေးဘူးဆိုတာ…သားသမီးတိုင်းသိနိုင်ကြပါစေ..
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် ……
Previous post နှဈဆနျး တဈရကျနေ့ တှငျ တတျနိုငျ သလောကျ အလှူအတနျးတှေ ပွုလုပျ ခှငျ့ ရတဲ့အတှကျ ဝမျးသာ ကွညျနူး နတေဲ့ မမဆောငျး
Next post လူတှေ ချေါနကွေတဲ့ နာ မညျ အတိုငျး ကိုယျတိုငျလညျး ဒလံ အကွီးစား ဖွဈတဲ့ အကွောငျး ဝနျ ခံ လိုကျ တဲ့ ထှနျးအိန်ဒွာဗိုလျ